तिथि मेरो पत्रु »5कुराहरू तपाईं एक पहिलो तारीख मा बारे मा कुरा हुँदैन
एक पहिलो तारीख एक परी कथा को पहिलो अध्यायमा हुन सक्छ, तर यो पनि तपाईं एक "अछुत" विषय छोयो किनकी कुल प्रकोप हुन सक्छ. भेट्टाउने प्रेम फिल्म यति सजिलो देखिन्छ, तर यो वास्तविक जीवनमा नै छ? रोमान्स सधैं सजिलै संग उड छैन, र आफ्नो प्राण जोडी भेट्टाउनु हामी प्रत्येक र हरेक एक को लागि सजिलो छैन. कहिलेकाहीं यो लागि लड्न कसरी थाह को एक प्रश्न हो, र कसरी अशुद्ध pas गर्नबाट गर्न, विशेष गरी आफ्नो पहिलो तारीख मा. यस तपाईं प्रत्येक अन्य बारे आधारभूत कुराहरू पत्ता लगाउन प्रयास गर्दा समय छ तापनि, यो के तपाईं सुरक्षित कुराकानी विषय छडी सबै भन्दा राम्रो छ. यहाँ तपाईं आफ्नो पहिलो तारीख मा कुरा गर्दै हुँदैन केही कुराहरू छन्:
कसैले आफ्नो राजनीतिक विचार महत्त्वपूर्ण छैनन् भन्छन्, तर तिनीहरूले एउटा पहिलो तारीख लागि एक सुरक्षित कुराकानी विषय बनाउन छैन. राजनीतिमा ल्याउने बस घृणा को वातावरण सृजना हुन सक्छ, र यो तपाईं चाहनुहुन्छ के छैन. जे होस, तपाईं एक गणतन्त्रात्मक कम से कम आफ्नो सम्बन्ध यस चरण मा ... डेमोक्रेट वा विपरीत भएको बनाउन छैन.
तपाईंको पूर्व(यस छ)
तपाईं एक किशोरी छैनन् भने, तिमी सबै भन्दा निश्चित आफ्नो पोर्टफोलियो मा केही असफल सम्बन्ध छ, र यो बिल्कुल ठीक छ. सबैजना गर्छ. कुनै कुरा तपाईं आफ्नो पूर्व / exes बारेमा भन्न के, पहिलो मिति यस्तो कुराकानी लागि सही समय छैन. त्यो नियन्त्रण कुतिया थियो? उहाँले कुल झटका थियो? यो तपाईं त्यो / त्यो तपाईं अरू केही सोच्न सक्छ रूपमा तपाईं बस भेटेका छन् कसैले बताउन चाहनुहुन्छ कुरा तर एक तीतो प्राण छैन. अर्कोतर्फ भने, के तपाईंले तिनीहरूको भन्न मात्र ठूलो शब्द, के तपाईं उनलाई प्राप्त थिएन छाप छोड्न सक्छ, र तपाईं छैनन्, त्यसैले, अर्को सम्बन्ध सुरु गर्न तयार. आफ्नो मिति पत्ता लगाउन खोज्छ भने तपाईं आफ्नो पूर्व संग भङ्ग किन, कुनै दोष वा भक्तिको समावेश गर्ने अस्पष्ट जवाफ दिन.
तपाईंको त सफा छैन विगतका
स्वच्छ वा dirtier, हामी सबै एक पछिल्लो छ, र यो हामी प्रेम पाउन योग्य छैन मतलब छैन. तथापि, यस तपाईं आफ्नो पहिलो तारीख मा आफ्नो अतीत misshapes घमन्ड छ होइन. तपाईं आफ्नो सम्बन्ध प्रारम्भिक चरणमा कम्तीमा एक निश्चित बिन्दु मा यी कुराहरूको बारेमा सफा आना हुनेछ, तर तपाईं पूरा पहिलो समय देखि दूर आफ्नो मिति तर्साउन छैन.
तपाईंको जैविक घडी
समय जान्छ, महिला विशेष गरी, तर पनि मानिसहरू आफ्नो जैविक घडी टिक सुन्न सुरु. तपाईं कहाँ परिवार सुरु गर्न र बच्चाहरु कि उमेर मिल्यो, तर यो उचित छ तपाईंले पहिले लागि सही साझेदार फेला. छैन घोडा अघि गाडी राख्न गर्छन्!
आफ्नो मनपर्ने यौन स्थिति
कुनै कुरा तपाईं ओछ्यानमा गर्दै मन पराउँछन् के मा तपाईं उत्तेजित गर्दछ र के, यो तपाईं आफ्नो मिति बारे पत्ता लगाउन चाहन्छौं पहिलो कुरा होइन. त्यसै गरी, यो तपाईं सम्भाव्य साझेदार बारेमा जान्न चाहन्छु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छैन. तपाईंले यी कुराहरू बारे कुरा गर्न घनिष्ठता को सही स्तर हासिल सम्म प्रतीक्षा.